လက်ရှိအင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ထားနိုင်မှုအပေါ်ကစားသမားဟောင်းကြီးအချို့ကတောင်မနာလိုဖြစ်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ #ဝိန်းရူးနီ | Football Myanmar
အင်္ဂလန် အသင်းခေါင်းဆောင် ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ ဝိန်းရူးနီက လက်ရှိအင်္ဂလန်နည်းပြကြီးဆောက်ဂိတ်ဦးဆောင်မှုနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာသူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသင်းသားတွေကို ကစားသမားဟောင်းကြီး အချို့က မနာလိုမှုအချို့ရှိနေတယ် လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် အသင်းဟာ ယနေ့ည မှာUEFA NATIONS LEAGUE ပွဲစဉ်အဖြစ် ခရိုအေးရှားအသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီး အနိုင်ရခဲ့ပါက ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် အသင်းဟာ ၂၀၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ လည်း ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်အထိ တက်ရောက်ထားနိုင်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ခြင်္သေ့သုံးကောင်လို့ အမည်ပြောင်ပေးခံထားရတဲ့ အင်္ဂလန် တို့ ဆောက်ဂိတ်ရဲ့ လက်အောက်မှာဟိန်းဟောက်သံခြိမ်းခြိမ်းညံနေပြီလို့ အများက ယူဆနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးတခုမှာ ဝိန်းရူးနီက- – – ” ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောဆိုခဲ့တဲ့ ကစားသမားဟောင်းအချို့ဟာလက်ရှိအင်္ဂလန် အသင်းစွမ်းဆောင်နေတဲ့အရာတွေကို သဘောကျဟန်မတူပါဘူး။ဒါဟာတကယ်တော့ လွဲမှားနေတာပါပဲ။
ကျွန်တော်ဟာ သူတို့နဲ့မတူပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာ အခုချိန်မှာလက်ရှိအသင်းသားတွေရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်နေပြီး သူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကိုပဲ အလိုရှိနေပါတယ်။အင်္ဂင်္လန် အသင်းမှာ ကျွန်တော် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ကစားထားခဲ့ရလို့ လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ခေတ်ကကုန်သွားပါပြီ။
အသင်းနဲ့ အတူ ပါဝင် ပတ်သက်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ကျေနပ်နေမိသလိုပဲ လက်ရှိအသင်းသားတွေရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကိုလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမြင်တွေ့ခွင့်ရချင်နေပါပြီ။
ဒီအသင်းဟာ အမိမြေအတွက် ဆုဖလား ၁လုံးလောက်တော့ သယ်ဆောင်လာပေးနိုင်မယ် လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားပါတယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝိန်းရူးနီ ဟာအသက် ၁၇နှစ်သားအရွယ်မှာပဲ နိုင်ငံ အသင်းအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၅နှစ်ခွဲကြာ ကစားပေးအပြီးမှာအနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူအနားယူချိန် နိုင်ငံအသင်းမှာပါရမီရှင် မျိုးဆက်တခုကျန်ရှိနေခဲ့ပြီး ဒေါ့မွန်အသင်းနဲ့အတူတောက်ပနေတဲ့ အသက်၁၈နှစ်အရွယ်တောင်ပံကစားသမားလေး ဆန်ချိုက အထင်ရှားဆုံး လူငယ်သွေးသစ်အဖြစ်ရှိနေပါတယ်။
ဆန်ချိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရူးနီက – – – ” ဆန်ချိုဟာ အံ့မခန်း ပါရမီရှင်တဦးဖြစ်လို့ သူလုပ်ပြထားနိုင်နေတာတွေကိုကျွန်တော် မအံ့သြပါဘူး။မနာလိုစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။အခုဆို သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေရှိထားခဲ့ပြီး အခုတော့သူ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါတယ်။
ကျွန်တော် သူတို့ အသင်းသားတွေအားလုံး အတွက်ကော အင်္ဂလန် အတွက်ပါ စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒါဟာ ဒီအစုအဖွဲ့ နောက်ထပ်မြင့်မားတဲ့ အဆင့်တခုကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဆီမီးအဆင့်အထိတက်ရောက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်မှာစွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာမျိုးကိုပြန်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လည်းသူတို့ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေကြပါလိမ့်မယ်။သူတုိ့မှာ နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်နိုင်မယ့် အလားအလာ ကောင်းတွေလည်း ရှိထားပါတယ်။
လူငယ်ကစားသမားတွေပါဝင်နေတဲ့ အစုအဖွဲ့မျိုးဖြစ်ပေမယ့် ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့စိတ်ထားမျိုးကို သူတို့မှာမြင်တွေ့ထားရပါတယ်။နောက်ထပ်အရာတွေအများကြီးအတွက် သူတို့ကို တွန်းအားပေးသွားဦးမှာပါ” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Previous Postလက်ရှိရာသီမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံရနေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ ဇာခါNext Postဇန်နဝါရီ မှာ ယူနိုက်တက် အသင်းကနေ ထွက်ခွာပြီး ထိပ်တန်း တိုက်စစ် အတွဲအဖက် ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖွယ် ရှိနေတဲ့ ဆန်းချက်ဇ်
11 thoughts on “လက်ရှိအင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ထားနိုင်မှုအပေါ်ကစားသမားဟောင်းကြီးအချို့ကတောင်မနာလိုဖြစ်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ #ဝိန်းရူးနီ”
aku bukan pembaca internet yg jujur tetapi web anda benar-benar bagus keep it up!
akuu bakal teruskan dan bookmark web anda untuk
kembali lagi kelak seluruhnya yang terbaik
verkaufen bester says:
This is notaconcern for the average residence users, who in all probability don’t upgrade their PCs anyway. One such side ofahouse that will require some care finally is the roof welches the college should current the right surroundings pertaining to finding out.
An outstanding share! I’ve just forwarded this ontoacolleague who has been doingalittle homework on this. And he actually ordered me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your website.
After you have broken the ice, you should be capable to feel extra at ease with each other, so you can start exploring new matters which are of interest to the each of you. LDS is short for Latter-day Saint huren lahr this leads many people to conclude that the world would be better without religions.